l Top 5 Free-adda si aad u nadiifiso virus iyo gunpoder ka phone Android
Sida Horumarada technology, sidaa sameeyaan haakarisku kaasoo aan weligiis joojiyo helitaanka wadooyin lagu Gudo nidaamyada. Tirada Anonymous ayaa kordhaya taasoo la micno ah in aan kaliya isticmaala computer laakiin sidoo kale dadka isticmaala mobile ahi ay ka digtoonaadaan halista by Anonymous kuwan. Virus iyo gunpoder waa weerar xaasidnimo ugu badan caadi ah in casriga ah android. In this article aan eegno qaar ka mid ah codsiyada antivirus ugu fiican ee ka shaqeeya shaqo fiican ayuuna u android dadka isticmaala telefoonka
Avast waa shirkad uu dhisay ay sumcad adduunka PC ah waxayna u muuqataa in ay sidoo kale ku qodbay hoos adduunka mobile. Antivirus Tani waxay bixisaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah astaamaha u isticmaala laga bilaabo ilaalinta furin si functionalities anti-xatooyada. Iyadoo avast, ilaalinta qalabka lagu sameeyey Ra'iisul siiyey in app wuxuu siiyaa gaashaan internetka ah, tababare network iyo tababare app awoodin users android sare ee ammaanka ah. In boqortooyada anti-tuuganimo, app ogolaadaa in dadka isticmaala ay ula socdaan, hel oo isku dubaridi qalabka la xaday fog. Waxaa xitaa ka mid ah gaadmada ah brannmur u rujin users android. Qurux waa in codsiga waa wax la awoodi-mid ka heli kartaa qaababka buuxa ee $ 15 sano.
Cheap marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale
Waxay leedahay soo diyaariyeen balaadhan oo ah sifooyinka
Waxa aanu si fiican ula shaqeeya telefoonada jir
360 ammaanka Anti-virus
Tani waa qalab dhan ka mid ah in loogu talagalay in lagu kor loogu qaado xawaare qalab iyadoo isha lagu hayo furin kasta oo laga yaabo in ay qaadsiin nidaamka. In la eego xawaaraha, app waa wanaagsan yahay ee nadaafadda files junk sida faylasha khasnado iyo RAM. Qalab bixisaa ammaanka fiicnayn iyada oo iskaanka goobaha xasuusta iyo barnaamijyadooda inta badan ilaa ay u shaqeynayaan taariikhda. Waxa aanu leeyihiin sifooyinka lagu naalloon karo anti-xatooyo lammaaneeyey by gaarka ah si looga hortago in files xog muhiim ah ka heli by dadka aan la ogalayn.
Nadiifin kartaa dhammaan faylasha tagay by barnaamijyadooda jir
Waxa kale oo uu leeyahay monitor xog ah
Waa bilaa naxariis ah oo ku saabsan khataraha ka iman kara
Waxay hoos u dhigi karaan casriga jir
Avg weli waa antivirus kale ayaa ahaa halbowlaha suuqa PC ka baqdin tayada adeegyada bixiya si ay u isticmaala PC. Dunida android, ay bar ayaa sidoo kale lagu soo dhigay mid aad u sarreeya leh codsigan lagu qiimeeyo mid ah barnaamijyadooda antivirus ugu fiican adduunka. Sidaas, waxa ka dhigo mid app aad u damcay? Waxa ugu horeeya ee ka dhigaya jiidasho leh waa in ay tahay macnaha lacag la'aan ah in aad si fudud u heli karaan iyaga oo aan si fartiisa jeebka naga qabo. Waa app ah MFT oo ammaanka inkastoo shaandhaynta barnaamijyada xaasidnimo ah ee Chine iyo internetka. App ayaa si gaar ah aad u functional in la siiyo amaanka internetka sida ay tahay inay u iskaan websites iyo URLs u hanjabaad. On top ka mid ah, app waa siman wanaagsan bixinta muuqaalada anti-xatooyo smart si loo yareeyo fursada aad waayaan gaarka ah ee xatooyada telefoonka. Tani ma aha waxaan halmaamay in app oo kale u nooleeyaa muuqaalada in awood isticmaala reserved ammaanka xogta phone sida app qufulada iyo kuwo kale.
waxa ay leedahay badan oo muuqaalada
Waxa ay u ogolaataa app qufulka, app gurmad iyo sim qufulka
Waxaa sidaas ma aha mid fudud in la isticmaalo
Waxay bixisaa sare ee ammaanka in ay Stock Android Browser laakiin ma aha sida badan in daalacashada kale
Hadda, haddii aadan laylis computer ah, ka dibna bitdefender ma aha erey cusub oo aad u. Sida dambe oo hore, antivirus waa la ogaaday in dadka isticmaala PC iyo waxa la kordhin dhulkeeda u telefoonada android. Antivirus waa loo jecel yahay in ay fududahay in la isticmaalo interface u ogolaanaya xitaa newbies in ay si fudud u maraan mahad. Waxa aanu gaaban oo ha of qoreysa in in ay siinaysaa ilaalinta furin ugu badnaan la baaritaano nidaam toos ah oo lagu daray waxa ay leedahay anti-xatooyo iyo sifooyinka gaarka ah. Waxa kale oo ay ku siin doonaan ammaanka daalacashada sida chrome opera mini, iyo kuwo kale
Si fiican u shaqeeyaa telefoonada android jir
Waxay bixisaa ammaanka qatar
Waxay leedahay muuqaalada fudud
Tani waa antivirus ah oo uu soo oodhan ka abuurtay si ay u bixiyaan dukaan one stop dadka isticmaala ay ku dareen in uu leeyahay ururinta functionalities. Waa aalad in iskaan doonaa gebi ahaanba meel gudahood telefoonka iyo dibadda si aad u hesho badbaadada ugu idiin bannaan tahay, waayo. App waxay leedahay widget ah oo ka dhigaya in ay aad u fududahay in la maareeyo xaaladda ammaanka ka hal meel ah. Waxa kale oo fiican in muuqaalada anti-xatooyo iyo asturnaanta-waxa ay leedahay dersin ka mid ah labada milmay wada si ay u hesho ammaanka users xitaa fog.
Waxay leedahay muuqaalada weyn
Waxaa gubtay badan oo awood
Talooyin in ay ka fogaadaan malwares
Si looga fogaado cudurada furin aynu eegno qaar ka mid ah waxyaabaha aad samayn kartaa:
Ku rakib-antivirus ayaa wax hore waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in la hubiyo in aad leedahay antivirus ah oo kaa caawin kara in aad hawlaha ammaanka ee aad telefoonka.
Waa in aad si taxadar leh u eeg waxa aad doonayso in aad kala soo bixi. Sidoo kale, alaabtii ay ilo ku kalsoon tahay download. Tusaale ahaan, waxaad barnaamijyadooda aad ilo sameeysa halkii boggagga qaybaha sadexaad ee ka soo dejisan kartaa.
Isticmaal ugu dambeeyay ee Android Version-Tani waa in la hubiyo in aad leedahay OS ah in wuxuu diyaariyaa wax cayayaanka laga yaabo in ay ka faaiidaysteen qalab xaasidnimo iyo dadka.
> Resource > masixi > Top 5 Free-adda si aad u nadiifiso virus iyo gunpoder ka phone Android